I-China Inconel i-600 Bolt abavelisi kunye nabathengisi | Sekonic
Inconel 600 (W. Nr. 2.4816) Bolt, Screw, Amandongomane
♦ Isixhobo: Inconel Alloy 600
♦ Ubukhulu: M10-M120
♦ IBakala: IBakala leAAA
♦ Sivelisa kunye nokuThengisa i-Inconel 600 bolt, Screw, Nuts njengobungakanani bemigangatho yamazwe aphesheya nayo inokuba yimveliso ngokokuzoba kwabathengi
Inconel 600I-nickel-chromium alloy esetyenziselwa usetyenziso oludinga ukubola kunye nokumelana nobushushu obuphezulu. Le alloy nickel yenzelwe ubushushu benkonzo ukusuka kwi-cryogenic ukuya kumaqondo obushushu aphakamileyo ku-1090 C (2000 F). Ayisiyomagnethi, ineempawu ezintle zoomatshini, kwaye inika indibaniselwano enqwenelekayo yamandla aphezulu kunye nokuqiniswa okuhle phantsi koluhlu olubanzi lwamaqondo obushushu. Umxholo we-nickel ophezulu kwi-UNS N06600 uyenza ukuba igcine ukumelana okukhulu phantsi kweemeko ezinciphisayo, iyenza inganyangeki nokubola ngenani lezinto eziphilayo kunye nezinto ezingaphiliyo, inika ukumelana ngokugqwesileyo kukonakala kwe-chloride-ion kunye nokubonelela ngokuchaseneyo nealkaline izisombululo.
Okulandelayo: Incoloy A-286 Bolt / Screw / Amandongomane
ingxubevange 600 evulwa
ngaphandle kwama-600 nut
nickel 600 evulwa
IHastelloy B / B2 / B3 Ibha ejikelezayo
Yenza ingxubevange R26 evulwa, Ucingo lweWelding, iringi yesitayile, IHaynes 25 Intambo, Isitayile 6B, Isitayile 6,